कसरी 2021 मा व्यापार र दैनिक नि: शुल्क विदेशी मुद्रा सिग्नल बाट लाभ को लागी जान्नुहोस्
VIP विदेशी मुद्रा संकेतहरू पाउनुहोस्
FX समाचार फिड
वित्त पोषित फरेक्स खाता
सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू
सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सूचकहरू
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क विदेशी मुद्रा संकेतहरू टेलीग्राम समूहहरू २०२१
मिनी र माइक्रो खाताहरू
सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा EAS
व्यवस्थित विदेशी मुद्रा खाताहरू
प्रबन्धित PAMM खाताहरू
फोरेक्स ट्रेडिंग पीडीएफ
क्रिप्टो स .्केतहरू
कसरी क्रिप्टो व्यापार गर्ने सिक्नुहोस्
Bitcoin कसरी ट्रेड गर्ने सिक्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क क्रिप्टो स Te्केतहरू टेलीग्राम समूहहरू २०२१
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू
क्रेडिट कार्डको साथ Bitcoin खरीद गर्नुहोस्
डेबिट कार्डको साथ Bitcoin खरीद गर्नुहोस्
कसरी Ethereum किन्न
बिटकोइन क्लाउड खनन
सर्वश्रेष्ठ Cryptocurrency वालेट
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो स्ट्याकि साइटहरु
विदेशी मुद्रा ट्रेड गर्न सिक्नुहोस्
विदेशी मुद्रा बजार के हो?
स्टक ट्रेड गर्न सिक्नुहोस्
दिन व्यापार गर्न सिक्नुहोस्
मूल्य कार्य ट्रेडिंग सिक्नुहोस्
फोरेक्स पिप्स के हुन्?
स्विंग ट्रेड गर्न सिक्नुहोस्
कसरी लाभ उठाउने
तपाइँको स्प्रेड कसरी प्रबन्ध गर्ने
स्क्याल्प व्यापार कसरी गर्ने
कसरी छोटो स्टकहरू
ट्रेडिंग हुँदा कसरी मार्जिन प्रयोग गर्ने
उत्तम ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू
सर्वश्रेष्ठ स्टक संकेतहरू
स्वचालित रूपमा eToro मा हाम्रो ट्रेडहरूको प्रतिलिपि गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग अनुप्रयोगहरू
युके ट्रेडिंग खाताहरू
मूल्य कार्य ट्रेडिंग पीडीएफ
फोरेक्स ट्रेडिंग हलाल हो
इस्लामी ट्रेडिंग खाताहरू
EToro मा सर्वश्रेष्ठ ट्रेडरहरू
सर्वश्रेष्ठ ASIC ब्रोकरहरू
सर्वश्रेष्ठ CFTC दलाल
सर्वश्रेष्ठ CySEC दलालहरू
सर्वश्रेष्ठ एफसीए ब्रोकरहरू
सर्वश्रेष्ठ सेबी ब्रोकरहरू
विश्व बजार समीक्षा
व्यापार गर्न सिक्नुहोस्
विश्वको सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा सिग्नल प्रदायक
विश्वको बजारहरु तपाईको औंलाको छेउमा
कुनै पनि समयमा, कहिँ पनि
नि: शुल्क सram्केतहरूको लागि हाम्रो टेलीग्राममा शामिल हुनुहोस्!
साप्ताहिक क्रिप्टो राउन्डअप
BTC, ETH, XRP र LTC प्राविधिक आउटलुक
विदेशी मुद्रा 0.1
क्रिप्टो 0.25 USD
अब व्यापार गर्नुहोस्
रिटेल CFD खाताहरूको .75०.%% पैसा गुमाउँछ
रिटेल CFD खाताहरूको .78.77०.%% पैसा गुमाउँछ
अब नि: शुल्क स Get्केतहरू प्राप्त गर्न सुरू गर्नुहोस्!
प्रति दिन १० अचूक, लाभदायक संकेतहरू
फोरेक्स र क्रिप्टो स to्केतहरूको सजिलो पहुँच
दैनिक प्राविधिक विश्लेषण र व्यापार सल्लाह
१ 15,000,००० भन्दा बढी सक्रिय व्यापारीहरूको समुदाय
वास्तविक-समय अलर्टहरू, सबै टेलिग्राम मार्फत!
टेलिग्राम समूहमा सम्मिलित हुनुहोस्
तपाईंको ईमेलमा तत्काल चेतावनीहरू
प्रति दिन 4-5 सटीक, लाभदायक संकेतहरू बीच!
विदेशी मुद्रा विशेषज्ञहरु
गोल्ड (XAUUSD) एक तल सार्ने मा, स्तर $ १1,760० मा अस्वीकार अनुहार
शुक्रवार, अक्टुबर 1, 2021
प्रमुख प्रतिरोध स्तर: $ १ 1,900 ००, $ १ 1,950 ५०, $ २००० प्रमुख समर्थन स्तर: $ १,2000५०, $ १, ,००, $ १,1,750५० गोल्ड (XAUUSD) दीर्घकालीन प्रवृत्ति: RangingGold (XAUUSD) १,1३० डलर मा ओभरहेड प्रतिरोध तल तल एक बगैंचामा रहेको छ। बगैंचाको चाल जुलाई देखि जारी छ। सेप्टेम्बर २ मा, खरीददारहरु १,700३० डलर मा ओभरहेड प्रतिरोध retested र repelled थिए। बजार मा भएको छ […]
डलर समेकित लाभ, ध्यान यूरो मा पारी
बिहीबार, सेप्टेम्बर 30, 2021
जब डलरले यस हप्ताको उपज-समर्थित बृद्धि पचाउँछ, बेच्ने ध्यान यूरो, विशेष गरी क्रस बजारमा सारिएको छ। यस बीच, बृद्धि जोखिम को भावना कमोडिटी मुद्राहरु र स्टर्लिंग लाई मद्दत गरीरहेको छ, अष्ट्रेलियन डलर प्याक को अग्रणी संग। एक स्थिर जोखिम मूड मा, येन र स्विस फ्रैंक सामान्यतया कमजोर छन्। यूरो क्षेत्र मा बेरोजगारी दर […]
AUDUSD एक नकारात्मक बजार दृष्टिकोण को बीच उदय जारी छ
AUDUSD मूल्य विश्लेषण-सेप्टेम्बर ३० अमेरिकी सत्र को दौरान, AUDUSD कर्षण प्राप्त भयो र ०.30२५0.7257 मा बढ्यो, एक नयाँ दैनिक उच्च एक व्यापक आधारित अमेरिकी डलर गिरावट द्वारा समर्थित। DXY ०.२० प्रतिशत तल छ, पहिलो पटक अंकित गरीयो यो चार दिन को लाभ पछि गिरावट आएको छ। स्थिर अमेरिकी बांड उपज र असमान अमेरिका को बावजूद […]
कुकुर / अमेरीकी डलर
Dogecoin (DOGE) $ 0.20 समर्थन भन्दा माथि उतार चढ़ाव, $ 0.16 मा गिरावट सम्भव छ
प्रमुख प्रतिरोध स्तर: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47 मुख्य समर्थन स्तर: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE/USD दीर्घकालीन प्रवृत्ति: BearishDogecoin's (DOGE) मूल्य 0.20 डलर मा अघिल्लो तल्लो भंग पछि $ 0.21 मा घट्यो। आज क्रिप्टो माथि उतार चढाव छ। $ 0.20 समर्थन। भर्खरको मूल्य गिरावट भन्दा पहिले, DOGE मूल्य $ ०.२१ समर्थन भन्दा तल तोडेको छ, डाउनट्रेन्ड पुनः सुरु गर्नु अघि यसलाई पुनः परीक्षण गरीयो। हाल, […]
डिजिटल मुद्रा वैश्विक अर्थव्यवस्था को लागी लाभदायक छ: BIS रिपोर्ट
बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स (बीआईएस) र केन्द्रीय बैंकहरुको एक समूहले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनले डिजिटल मुद्राले छिटो बस्ती र सस्तो स्थानान्तरणलाई बढावा दिन सक्छ। करिब दुई हप्ता अघि, बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स (बीआईएस) इनोवेशन हबका प्रमुख बेनोत कुरीले भने कि केन्द्रीय बैंकले जनादेश उठाउनु पर्छ र […]
USDJPY रैली जारी छ किनकि यो अधिक उत्साहजनक गति प्राप्त गर्दछ
USDJPY विश्लेषण - मूल्य माथिल्लो रैली को लागी जारी छ को रूप मा गति बढ्छ USDJPY रैली को रूप मा तेजी को गति बृद्धि जारी छ। 109.100 महत्वपूर्ण कुञ्जी स्तर को नजिक एक तेजी engulfing मोमबत्ती पछि क्रेताहरु लाई यो स्थिति प्राप्त भयो। बुल्सले तब दबाब बढायो, र बजार माथी माथी रैली जारी छ। मूल्य, तथापि, पुग्न को लागी सेट छ […]
अमेरिका मा बिटकोइन खनन उद्योग हालको चीन प्रतिबन्ध बाट लाभान्वित हुन सक्छ: फ्लोरिडा मेयर
मियामी, फ्लोरिडाका मेयर — फ्रान्सिस स्वारेज — विश्वास गर्छन् कि बिटक्वाइन (बीटीसी) र क्रिप्टोकरन्सीमा चिनियाँ सरकारको क्र्याकडाउन अमेरिकी बजारको फाइदा लिने महत्वपूर्ण अवसर हो। मेयर, जो वर्तमान मा एक बिटकॉइन हब मा आफ्नो शहर को निर्माण मा काम गर्दछ, ब्लूमबर्ग लाई भन्यो कि: "अब मोड्ने बिन्दु हो। यो एक अविश्वसनीय बनाउँछ […]
CYCE-खेल परिवर्तन टोकन कि वैश्विक प्रभाव को सुविधा
CYCE, एक groundbreaking ERC-20 टोकन कि मौलिक रूपले हामी cryptocurrency को बारे मा सोच्ने तरीका परिवर्तन हुनेछ संग आधार छुँदै। यो टर्की व्यापार क्रिप्टो कार्बन ऊर्जा को पहिलो blockchain पहल हो, तर यो एक उच्च नोट बन्द छ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने उद्देश्य संग, CYCE नवीकरणीय ऊर्जा को रूपान्तरण मा क्रान्ति गर्न चाहन्छ […]
Uniswap (UNIUSD) मूल्य: $ 17 स्तर मा बुलिश आन्दोलन ट्रिगर, $ 30 सम्म जारी रहन सक्छ
Uniswap मूल्य विश्लेषण - सेप्टेम्बर 30 मूल्य $ 26 को प्रतिरोध स्तर र $ 30 र $ 37 को प्रतिरोध स्तर तिर बढ्न सक्छ। $ 26, $ 21 र $ 17 मा समर्थन स्तर तिर बजार वा मंदी उल्टो को परिणाम हुन सक्छ बुलहरु द्वारा $ 14 को प्रतिरोध स्तर प्रवेश गर्न असमर्थता। UNI/USD बजार […]
उन्नत नगद कार्ड
उन्नत नगद कार्ड समीक्षा: कसरी AdvCash सीमा जाँच गर्न को लागी
उन्नत नगद, AdvCash को रूप मा संक्षिप्त, एक व्यापक भुक्तानी संगठन हो कि 2014 मा अस्तित्व मा आयो। यसबाहेक, यो प्रणाली पनि वेभ क्रेस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, Bitcoin डेबिट कार्ड समुदाय मा प्रसिद्ध संग सम्बद्ध छ। यो प्लेटफर्म भर्चुअल संग सम्बन्धित हरेक व्यक्ति को लागी एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दछ [...]
को साथ बजार ट्रेड गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ विदेशी सिग्नलहरू
हाम्रो पालना नि: शुल्क विदेशी मुद्रा संकेत क्रिप्टोकरन्सी, वस्तु र सूचकांकमा
सबै भन्दा राम्रो व्यापारीहरुको प्रतिलिपि गर्नुहोस्
संग बजार अवसरहरु पक्राउ सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा दलाल
विदेशी मुद्रा रणनीति र समाचार ट्रेड गर्न सिक्नुहोस्
फोरेक्स ब्रोकर र
विदेशी मुद्रा ब्रोकरहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
निस्सन्देह, एक दलालले विदेशी मुद्रा बजारमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। तर एक शुरुआतको रूपमा, के तपाइँ बुझ्नुहुन्छ दलालहरूले के भूमिका खेल्छन्? हाम्रो पढ्नुहोस् फोरेक्स ब्रोकरहरूको गाइड यहाँ छ एक विदेशी मुद्रा दलाल को प्राथमिक भूमिका जान्न।
धेरै ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा बजार मा एक newbie रूपमा गरिनु पर्छ, तर तब (फेरि), तपाईं आफ्नो ट्रेडहरू गर्न सबै भन्दा राम्रो विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफर्म आवश्यक छ। त्यो किन हो हाम्रो पृष्ठ यहाँ वर्णन गर्दछ शुरुआतीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू।
ट्रेडिंग जर्नल राख्नुहोस्
एक ट्रेडिंग जर्नल केवल तपाइँको सबै ट्रेडिंग गतिविधि को लग हो। सामान्यतया, एक पत्रिकाले कुनै गम्भीर व्यापारीहरूलाई उद्देश्यपूर्ण रूपमा आफूलाई मूल्या to्कन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण प्रदान गर्दछ। तर छुट्टै पत्रिका राख्नुको अर्थ के हो? हामी तपाईंलाई के जान्नु पर्छ सबै बताउन दिनुहोस् यहाँ.
ब्याज दरहरु पढ्दै
ब्याज दर परिवर्तनले विदेशी मुद्रा बजारलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। परिवर्तनहरू आठवटा विश्वव्यापी केन्द्रीय बैंकहरू मध्ये एकले साधारणतया परिवर्तन गर्न सक्दछ। परिवर्तनले बजार व्यापारीहरुलाई तत्काल प्रभाव पार्छ, र त्यसकारण, कसरी प्रतिक्रिया गर्ने र पूर्वानुमान गर्ने यी चालहरू पहिलो मध्येका हुने छन्। बढी नाफा कमाउने चरणहरू.
प्याकेज छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको खरीद पूरा गर्नुहोस्
पहिलो दिनबाट सफलता
व्यापार गर्न सिक्नुहोस् यदि तपाईं भर्खरको को दुनिया मा शुरू गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन व्यापार, तपाईं निश्चित रूपमा सही ठाउँमा आउनु भएको छ। हाम्रो वेबसाइटले तपाइँको ट्रेडिंग क्यारियरलाई दायाँ खुट्टामा बन्द गर्नका लागि सबै आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।
हामी सबै चीजहरूको ट्रेडिंगमा विस्तृत मार्गनिर्देशनहरू प्रदान गर्दछौं - जस्तै कसरी मल्टि ट्रिलियन पाउन्ड विदेशी मुद्रा उद्योगले काम गर्दछ, CFD हरू के हुन् र किन उनीहरू तपाईंको दीर्घकालीन लगानी लक्ष्यहरू, लिभरेज, स्प्रेड, बजार अर्डरहरू, र अरू केहि महत्वपूर्ण छन्। हामी सोच्दछौं कि तपाईंले आफ्नो फन्ड जोखिम उठाउनु अघि तपाईंले जान्नुपर्दछ।
महत्वपूर्ण रूपमा, हाम्रा धेरै शैक्षिक उपकरणहरू मार्फत आवश्यक समय खर्च गर्ने बित्तिकै, तपाईं आफ्नो अनलाइन ट्रेडिंग प्रयासहरूको सफल बनाउनको लागि आवश्यक सीप र ज्ञानको साथ हाम्रो प्लेटफर्म छोड्नुहुनेछ।
शुरुआतीहरूको लागि ट्रेडिंग: कसरी अनलाइन ट्रेडिंगले काम गर्दछ?
यदि तपाईंले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै एकल व्यवसाय राख्नु भएको छैन भने, यो मौलिक हो कि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले आफ्नो पैसासँग बाँडनु भन्दा पहिले के गर्दै हुनुहुन्छ। सबै पछि, अनलाइन ट्रेडिंग जोखिमको अधिकताका साथ आउँदछ - धेरै जसो तपाईंसँग लगातार नाफा कमाउने क्षमतामा बाधा पुग्न सक्छ। त्यस्तै, अन्त कसरी अन्त प्रक्रिया को प्रक्रिया को एक-360० डिग्री सिंहावलोकन प्राप्त गरेर सुरु गरौं।
एक अनलाइन ब्रोकर छनौट गर्दै
अनलाइन ट्रेड गर्नका लागि तपाईले ब्रोकर प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। लामो समय गयो जब तपाईले फोनमा पारंपरिक स्टॉकब्रोकरको साथ अर्डर किन्नु पर्छ।
यसको विपरित, सबै चीज अब अनलाइन कार्यान्वयन हुन्छ। वास्तवमा, तपाई केवल तपाईको आफ्नै घरको आरामबाट पनि व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्राय: अनलाइन ब्रोकरहरू अब पूर्ण विकसित व्यापार अनुप्रयोगहरू प्रस्ताव गर्छन्। त्यस्तै, अब तपाईं चालमा रहँदा व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यो भनिएपछि, त्यहाँ शाब्दिक रूपमा हजारौं अनलाइन दलालहरू छन् जुन दैनिक खुद्रा ग्राहकहरूको सेवा गर्दछन्। एकातिर, यो तपाईलाई व्यापारीको दृष्टिकोणबाट धेरै फाइदाजनक छ, किनकि प्लेटफर्मको ओभर-स्याचुरेसनको अर्थ हो कि ब्रोकरहरूले प्रतिस्पर्धालाई रोक्नको लागि पहिलेभन्दा माथि हुनुपर्दछ।
यो कम ट्रेडिंग शुल्क र कडा स्प्रेड, वा 'प्रतिलिपि ट्रेडिंग' जस्ता अभिनव सुविधाहरूको रूपमा आउन सक्छ। अर्कोतर्फ, यसले कुन अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा साइन अप गर्न जान्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ।
तपाईं कसरी एक अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म छनौट गर्नुहुन्छ?
बाटोमा तपाईंलाई मद्दत गर्न, हामीले केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू सूचीबद्ध गरेका छौं जुन तपाईंलाई अनलाईन ब्रोकर छनौट गर्दा विचार गर्न आवश्यक छ।
बेलायतमा आधारित खुद्रा ग्राहकहरूलाई अनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रस्ताव गर्न, दलालहरूलाई वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) द्वारा विनियमित गर्न अनिवार्य छ। त्यस्तै रूपमा, यो एक बहस नगरी आवश्यकता हो जब यो नयाँ प्लेटफर्म छनौट गर्न आउँछ।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, अनलाइन ब्रोकरले यसको एफसीए रेजिष्ट्रेसन नम्बर सूचीबद्ध गर्दछ, जुन तपाईं त्यसपछि नियामक वेबसाइट मार्फत क्रस-सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो गर्दैन भने, तपाइँ एफसीए रेजिस्टर मार्फत ब्रोकरको नाम अनलाइन खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, यदि ब्रोकर एक एफसीए इजाजत पत्र को प्राप्ति मा छैन, तपाईं सबै लागत प्लेटफर्मबाट अलग रहनु पर्छ।
कोषहरू जम्मा गर्ने र फिर्ता लिने सन्दर्भमा तपाईंले कुन भुक्तानी विधि प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ। यो गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड मार्फत हो, किनकि निक्षेपहरू सामान्यतया तत्काल हुन्छन्।
यसबाहेक, केहि ब्रोकरहरूले तपाईंलाई PayPal वा Skrill जस्ता e-वालेट प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छन्, जे होस् यो सँधै त्यस्तो हुँदैन। थप रूपमा, धेरै जसो दलालले बैंक स्थानान्तरण समर्थन गर्दछ। जे होस् यसले सामान्य रूपमा हाइगर सीमालाई अनुमति दिन्छ, बैंक स्थानान्तरण सब भन्दा ढिलो भुक्तान विकल्प हो।
Es शुल्क र स्प्रेडहरू
अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्म प्रयोग गर्न तपाईंले केही प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्छ, किनकि पैसा कमाउने व्यवसायमा दलालहरू छन्। तपाईंले भेरिएबल कमिसन तिर्नु पर्ने हुन सक्छ, जुन तपाईंको ट्रेडको रकमको प्रतिशत हो। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ ,4,000 worth,००० को मूल्य मा एक व्यापार राख्नु, र दलाल आयोग मा 0.2% चार्ज, तब तपाइँ फीस मा £ 8 तिर्न समाप्त हुनेछ।
कमिशनको शीर्षमा, तपाइँले फैलावटलाई पनि विचार गर्नु पर्छ। यो 'खरीद' मूल्य र 'बेच्ने' मूल्य बीचको भिन्नता हो। यदि प्रसार धेरै उच्च छ, तब यसले लगातार नाफा कमाउने तपाईंको क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उदाहरण को लागी, यदि प्रसार एक 1% को वास्तविक दुनिया प्रतिशत को मात्रा, तपाईं कम्तिमा तोड्न को लागी कम्तिमा 1% बनाउन आवश्यक छ।
🥇 वित्तीय साधनहरू
दलाल द्वारा होस्ट गरिएको वित्तीय उपकरणहरूको संख्या र प्रकारको बारेमा पनि तपाईले केही विचारहरू पनि राख्नु पर्छ। बहुसंख्यक केसहरूमा, अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्मले फोरेक्स र CFD हरू समेट्छ। पहिलेको सन्दर्भमा, यो यही हो जहाँ तपाईं सस्तो मूल्य निर्धारण आन्दोलनहरूको मुनाफाको दृश्यको साथ, मुद्राहरू खरीद र बिक्री गर्नुहुन्छ।
CFDs को मामलामा (अनुबन्धका लागि मतभेद), यसले तपाईंलाई अन्तर्निहित सम्पत्ति स्वामित्वको आवश्यकता बिना नै कुनै पनि सम्पत्ति वर्गमा अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, CFDs ले तपाईलाई स्टक र सेयरहरू, सुन, तेल, प्राकृतिक ग्यास, शेयर बजार सूचकांक, ब्याज दरहरू, फ्यूचरहरू र क्रिप्टो मुद्राको कुनै पनि व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।
। ट्रेडिंग उपकरण
तपाईं ब्रोकर प्रयोग गरेर उत्तम हुनुहुन्छ जुन प्राविधिक सूचकहरूमा कडा जोड दिन्छ। त्यस्ता उपकरणहरूले तपाईंलाई एक उन्नत मामलामा ऐतिहासिक मूल्य प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो गर्दा, तपाईं मूल्या of्कन गर्ने उत्तम सम्भावना खडा गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको छनौट सम्पत्ति को भविष्यको दिशा जान्छ।
प्रख्यात प्राविधिक सूचकहरूले स्टोकेस्टिक ओसिलेटरहरू, चाल औसत (एमए), सापेक्ष शक्ति अनुक्रमणिका (आरएसआई), र बोलिंगर ब्यान्ड समावेश गर्दछ। अन्तत: तपाईले अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्म छान्नु पर्छ जुन दर्जनौं प्राविधिक सूचकहरू प्रस्ताव गर्दछ।
अनुसन्धान उपकरणहरूको पहुँच पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो जुन तपाइँले नयाँ ट्रेडिंग प्लेटफर्म छनौट गर्दा हेर्नु आवश्यक पर्दछ। यसले वास्तविक समय समाचार अपडेटहरू समावेश गर्नुपर्दछ जुन विशेष सम्पत्ति वा उद्योगलाई असर गर्ने सम्भावना हुन्छ।
यसबाहेक, यो उपयोगी पनि छ जब ब्रोकरहरूको समर्पित विश्लेषण सेक्सन हुन्छ। यो जहाँ विशेषज्ञ व्यापारीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रकाशित गर्छन् जहाँ निश्चित सम्पत्ति छोटो अवधिमा बजारमा सर्ने सम्भावना हुन्छ।
अनलाईन ट्रेडिंग प्लेटफर्मको साथ खाता खोल्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले एक अनलाइन ब्रोकर छान्नुभयो जुन तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, तपाईंले त्यसपछि खाता खोल्न आवश्यक पर्दछ। दर्ता प्रक्रिया सामान्यतया -5-१० मिनेट भन्दा बढि लिन्छ। अनिवार्य रूपमा, ब्रोकरलाई तपाईं को हुन् भनेर जान्नु आवश्यक छ, वा तपाईंसँग अनलाइन ट्रेड गर्न आवश्यक अनुभव छ वा छैन। यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि प्लेटफर्म एफसीए द्वारा उल्लिखित नियमहरूको पालना गर्दछ।
ट्रेडिंग साइटको साथ खाता खोल्दा तपाईलाई कुन सूचना प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ यहाँ छ।
✔️ व्यक्तिगत जानकारी
तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। यसले तपाईंको पूरा नाम, घर ठेगाना, जन्म मिति, राष्ट्रिय बीमा नम्बर, र सम्पर्क विवरण समावेश गर्दछ।
✔️ रोजगार जानकारी
ब्रोकरले तपाईको रोजगारको स्थिति र कर पछि तपाइँको वार्षिक आम्दानी थाहा पाउँदछ।
✔️ वित्तीय स्थायी
तपाईंले आफ्नो अनुमानित कुल सम्पत्ति के हो ब्रोकरलाई थाहा दिनु आवश्यक छ, र तपाईं खुद्रा हो वा संस्थागत ग्राहक हुनुहुन्छ।
✔️ अघिल्लो ट्रेडिंगको अनुभव
ब्रोकरले तपाईंलाई तपाईंको अघिल्लो ट्रेडिंग अनुभवसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्नेछ। यसमा सम्पत्तीको प्रकार समावेश हुनेछ जुन तपाईं विगतमा व्यापार गर्नुभयो, र औसत व्यापार आकार।
एन्टी-मनी लाउन्डरि laws कानूनको साथ अनुरूप रहन, सबै एफसीए विनियमित ट्रेडिंग प्लेटफर्महरूले तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दछ। प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सीधा छ र केवल तपाइँको सरकार द्वारा जारी आईडी को एक प्रतिलिपि, साथै ठेगाना को प्रमाण अपलोड गर्न को लागी आवश्यक छ।
यद्यपि केहि ब्रोकरहरूले प्रमाणिकरण प्रक्रिया पूरा हुनु अघि तपाईंलाई रकम जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं कागजातहरू पुष्टि नभएसम्म तपाईं निकासी गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। त्यस्तै, केवाईसी (तपाईंको ग्राहकलाई थाँहा दिनुहोस्) प्रक्रिया बाहिर जानुहुन्छ तपाई खाता खोल्ने बित्तिकै।
जब यो तपाईंको ब्रोकरेज खाता कोष को लागी आउँछ, तपाइँलाई बिभिन्न भुक्तानी विधिहरु को एक धेरै प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यद्यपि यो ब्रोकर-ब्रोकर भन्दा फरक हुनेछ, हामी तल सबैभन्दा सामान्य निक्षेप र फिर्ता विधिहरू सूचीबद्ध छौं।
🥇 डेबिट र क्रेडिट कार्ड
डेबिट / क्रेडिट कार्ड मार्फत पैसा जम्मा गर्दा प्राय: फन्डहरू तुरन्त जम्मा हुने गर्दछ। शुल्कमा नजर राख्नुहोस् - विशेष गरी यदि क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर। जबकि ब्रोकरले तपाईंलाई प्रति-शुल्क कुनै शुल्क लिन सक्दैन, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताले जम्मा नगद अग्रिमको रूपमा वर्गीकरण गर्न सक्दछ। यदि यसले गर्छ भने, यसले%% शुल्क लिन सक्दछ, तत्काल ब्याजको साथ लागू हुन्छ।
🥇 बैंक स्थानान्तरण
अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्मको विशाल बहुमतले बैंक स्थानान्तरण स्वीकार्नेछ। प्रक्रिया डेबिट / क्रेडिट कार्ड भुक्तान भन्दा धेरै ढिलो हुन्छ, यद्यपि सीमा सामान्यतया बढी हुन्छ। यदि निक्षेप यूके द्रुत भुक्तानी मार्फत गरिएको छ भने, कोष एकै दिनको आधारमा जम्मा हुन सक्छ।
जे होस् डेबिट / क्रेडिट कार्ड वा बैंक स्थानान्तरण भन्दा कम सामान्य, नयाँ उमेर दलाल संख्या अब ई-वालेट स्वीकार। यसले PayPal, Skrill, र Neteller को मनपर्ने समावेश गर्दछ। ई-वालेट निक्षेपहरू नि: शुल्क मात्र हुन्, तर प्राय जसो केसहरूमा ती तपाईंलाई द्रुत समयसीमामा तपाईंको रकम फिर्ता लिन अनुमति दिन्छन्।
यदि तपाईं बहु ट्रिलियन पौंड फोरेक्स स्पेसबाट मुनाफा लिन चाहानुहुन्छ भने, तब तपाईं मुद्राहरू खरीद र बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। बढि अवधारणा को रूप मा एक मुद्रा बनाउन र जब मुद्रा विनिमय दरहरु सार्न छ।
त्यस्तै रूपमा, तपाईं एक विदेशी मुद्रा 'जोडी' व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन दुई फरक मुद्राहरू समावेश गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं पाउरो स्टर्लिंग को यूरो बिरुद्द व्यापार गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले GBP / EUR मा ट्रेड गर्नु पर्छ।
त्यसो भनिएपछि, केहि दलालले १०० भन्दा बढी भिन्न मुद्रा जोडी सूचीबद्ध गर्दछ। यी मुद्रा जोडीहरूलाई तीन मुख्य कोटीहरूमा विभाजित गरिएको छ - ठूला, नाबालिगहरू, र एक्सोटिक्सहरू।
नामले संकेत गरेझैं प्रमुख जोडीले दुई 'प्रमुख' मुद्राहरू समावेश गर्दछ। यसमा अमेरिकी डलर, ब्रिटिश पाउन्ड, यूरो, जापानी येन, र स्विस फ्रान्क जस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूको मुद्रा समावेश हुनेछ।
यदि तपाईं भर्खरै फोरेक्स ट्रेडिंगको दुनियामा शुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो प्रमुख जोडीसँग टाँसिनु राम्रो हुन्छ। यो किनभने प्रमुखले कम अस्थिरता स्तर, कडा फैलिएको र तरलताको थुप्रो सामना गर्दछ।
साना जोडीहरूले एक प्रमुख मुद्रा र एक कम तरल मुद्रा समावेश गर्दछ। AUD / USD एक सानो जोडी को एक प्रमुख उदाहरण हो। अमेरिकी डलरले जोडीको प्रमुख मुद्रालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि अष्ट्रेलियाई डलर कम मांग गरिएको मुद्रा हो।
यद्यपि नाबालिगहरूले अझै ठूलो तरलताबाट फाइदा लिन्छन्, स्प्रेडहरू प्रायः ठूलाहरू भन्दा धेरै फराकिलो हुन्छन्। यसको मतलब ट्रेडिंग नाबालिगहरू लामो दौडमा बढी महँगो हुन्छन्। त्यसो भएकोले, सानो जोडीमा अस्थिरता थोरै बढी हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ ठूलो फाइदाको लागि थप अवसरहरू छन्।
विदेशी मुद्रा जोडीहरूले एक उभरिरहेको मुद्रा र एक प्रमुख मुद्रा समावेश गर्दछ। यसमा अमेरिकी डलर र भियतनामी डोong, वा टर्की लीरा बिरूद्ध पाउन्ड स्टर्लिंग समावेश हुन सक्छ।
जे भए पनि, विदेशी जोडीहरू अत्यधिक अस्थिर हुन सक्छन्, र स्प्रेडहरू प्राय धेरै विस्तृत हुन्छन्। यस कारणले गर्दा तपाईं उन्नत तहमा विदेशी मुद्रा व्यापार गर्न सिक्नुहुन्न भने तपाईं एक्जोटिक्सलाई वेवास्ता गर्न उत्तम हुनुहुन्छ।
कसरी एक विदेशी मुद्रा व्यापार काम गर्दछ?
एकचोटि तपाईंले एक मुद्रा जोडी छनौट गर्नुभयो जुन तपाईंको कल्पना लिन्छ, तपाईंले त्यसपछि निर्धारण गर्नु पर्छ कुन बजार जान्छ। हामीले आधारभूत कुराहरूमा अन्वेषण गर्नुभन्दा पहिले, यो 'खरीद' अर्डर र 'बेच्ने' अर्डरको बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नु महत्त्वपूर्ण छ विदेशी मुद्रा ट्रेडिंगको सन्दर्भमा।
🥇 यदि तपाइँ मुद्रालाई मा स्थित छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने बाँया हात पट्टि जोडी जाँदै छ बढ्नु मानमा, त्यसपछि तपाइँले एक राख्नु पर्छ अर्डर किन्नुहोस्.
🥇 यदि तपाइँ मुद्रालाई मा स्थित छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने दायाँ-पट्टि जोडी जाँदै छ बढ्नु मानमा, त्यसपछि तपाइँले एक राख्नु पर्छ अर्डर बेच्नुहोस्.
उदाहरण को लागी, मानौं कि तपाई जीबीपी / अमेरीकी डलरको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईंलाई जस्तो लाग्छ कि GBP अमेरीकी डलरको बिरूद्ध मूल्यमा बढ्ने छ भने हामी एक खरीद आदेश दिन्छौं। त्यस्तै, यदि तपाईंलाई GBP को बिरूद्ध डलर बढ्नेछ जस्तो लाग्छ भने, तपाईंले बेच्ने अर्डर राख्नुहुनेछ।
फोरेक्स ट्रेडिंगमा 'खरीद गर्नुहोस्' अर्डरको उदाहरण
GBP / USD थिमको साथ टाँसिएको, भन्न दिनुहोस् कि तपाइँले £ 500 'खरीद' अर्डर राख्नुभएको छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि GBP अमेरीकी डलरको बिरूद्ध मूल्यमा बढ्नेछ।
जीबीपी / अमेरिकी डलरको मूल्य हाल १.1.32२ छ
तपाइँले £ 500 खरीद अर्डर राख्नुभयो
GBP / USD १.1.34 मा बढ्छ, यसको मतलब GBP अमेरीकी डलरको बिरूद्ध बलियो हुँदै गइरहेको छ
यसले १.११% को वृद्धि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
तपाईंको लाभ £ 7.55 (x 500 x 1.51%) मा राशि हुन्छ
विदेशी मुद्रा ट्रेडिंगमा 'बेच्ने' अर्डरको उदाहरण
यस उदाहरणमा, हामी पनि जीबीपी / अमेरीकीका साथ छडी लाग्नेछौं। यस पटक मात्र, हामी एक 'बेच्ने' अर्डर राख्न जाँदैछौं। यसको मतलव तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ कि अमेरिकी डलरले जीबीपीलाई मात दिनेछ
तपाइँले £ १1,500०० बेच्ने अर्डर राख्नुभयो
जीबीपी / अमेरिकी डलर १.२ to मा घट्छ, जसको मतलब यूएसबी जीबीपीको बिरूद्ध बलियो हुँदै गइरहेको छ
यो २.२2.27% को कमी प्रतिनिधित्व गर्दछ
तपाईंको लाभ £ 34.05 (x 1,500 x 2.27%) मा राशि हुन्छ
CFDs व्यापार गर्न सिक्नुहोस्
अनलाइन ट्रेडिंग स्पेसको दोस्रो प्रमुख क्षेत्र भनेको CFD हरू हो। हामीले छोटकरीमा पहिले नै उल्लेख गरेझैं, CFDs ले तपाईंलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्येक सम्पत्ति वर्ग कल्पना गर्न योग्य खरीद र बेच्न अनुमति दिन्छ। यो किनभने यो तपाईं लगानी गर्न अन्तर्निहित सम्पत्ति को स्वामित्व वा भण्डारण गर्न आवश्यक छैन।
यसको सट्टा, CFDs मात्र प्रश्न मा सम्पत्ति को वास्तविक-विश्व मूल्य ट्रैक। त्यस्तै, CFD हरू बजारमा पहुँचको लागि अत्यधिक अनुकूल हुन्छन् जुन अन्य पुग्न गाह्रो हुन्छ।
तल हामीले CFDs लाई कभर गर्ने सम्पत्ति वर्ग सूचीबद्ध गरेका छौं।
Ocks स्टक र सेयरहरू
✔️ ब्याज दरहरू
✔️ हार्ड धातुहरू
कसरी एक CFD व्यापार काम गर्दछ?
कसरी एक CFD व्यापार वास्तव मा काम को रूप मा, यो धेरै विदेशी खरीद जोडी बेच्ने समान छ। मुख्य भिन्नता जुन तपाईंलाई यस चरणमा सचेत गराउनु पर्छ शब्दावली हो। विदेशी मुद्रामा जबकि हामी सामान्यतया खरीद किन्नुहोस् वा बेच्ने अर्डरको रूपमा ट्रेडहरू निर्धारण गर्दछौं, CFD स्पेसमा हामी सर्तहरू 'लामो' र 'छोटो' प्रयोग गर्दछौं।
यसबाहेक, CFDs जोडी मा विदेशी मुद्रा जस्तै आउँदैन। यसको सट्टामा, तपाईं वर्चस्व मुद्राको वास्तविक-विश्व मूल्यको बिरूद्ध एक सम्पत्ति व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन सामान्यतया अमेरिकी डलर हो। उदाहरण को लागी, तपाईं स्टक, तेल, प्राकृतिक ग्यास, वा सुन को रूप मा CFDs व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ कि - सम्पत्ति सामान्यतया अमरीकी डालरको मुल्या .्कन गरिन्छ।
You यदि तपाइँ सम्पत्तिमा गइरहेको छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने बढ्नु मानमा, त्यसपछि तपाइँले एक राख्नु पर्छ लामो अर्डर गर्नुहोस्।
You यदि तपाइँ सम्पत्तिमा गइरहेको छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने घटाउनुहोस् मानमा, त्यसपछि तपाइँले एक राख्नु पर्छ छोटो अर्डर गर्नुहोस्।
यो ट्रेडि C CFD का सब भन्दा आकर्षक पक्ष हो, किनकि तपाईंसँग सँधै छोटो-बेच्ने विकल्प हुन्छ। यो जहाँ तपाईं सम्पत्ति हराउने मूल्य मा अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन परम्परागत लगानी क्षेत्रमा खुदरा ग्राहकको रूपमा नक्कल गर्न कठिन हुन्छ।
यदि तपाईं दीर्घकालीन आधारमा स्टकहरू व्यापार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं पारंपरिक स्टॉकब्रोकरबाट छनौट गरिएका इक्विटीहरू खरीद गर्न उत्तम हुनेछ। यो किनभने तपाईं स्टक एकैसाथ स्वामित्व पाउनुहुनेछ, मतलब कि तपाईं लगानीकर्ता संरक्षणको दायरामा अभ्यस्त हुनुहुनेछ।
महत्वपूर्ण रूपमा, यो प्रश्नमा कम्पनी द्वारा वितरित कुनै लाभांश भुक्तान गर्न कानूनी अधिकार समावेश छ - शेयर तपाईं धारण गर्दै संख्या को अनुपातमा।
जे होस्, यदि तपाईं छोटो अवधिको आधारमा स्टकहरू ट्रेड गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले CFD प्लेटफर्म प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। यो किनभने परम्परागत अर्थमा स्टक किन्न र बेच्न सम्बन्धित फीस सीएफडी भन्दा धेरै बढी छ। यसबाहेक - खुद्रा ग्राहकको रूपमा तपाईंसँग थोरै हुनेछ, यदि कुनै छ भने, तपाईंको छनौट इक्विटी छोटो-बेच्नको लागि सक्षम हुने संभावना। फेरि फेरी, यो वास्तवमै सबै CFD प्लेटफार्महरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको हो।
जे होस्, यदि तपाईं ग्लोबल शेयर बजार अनलाइन पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन् - व्यक्तिगत सेयर किन्नु र बेच्न, वा सूचकांकमा लगानी गर्ने।
Ind ट्रेडिंग व्यक्तिगत सेयर
यदि तपाईंसँग व्यक्तिगत कम्पनीहरूमा लगानी गर्न आवश्यक सीपहरू छन् भने, तपाईंसँग हजारौं CFD इक्विटीमा पहुँच हुनेछ। यसले न्स्डैक र लन्डन स्टक एक्सचेन्जको रूपमा लोकप्रिय बजारमा सूचीबद्ध ब्लू-चिप कम्पनीहरू समावेश गर्दछ, साथै साना-बीच-मिड क्याप कम्पनीहरू।
यदि CFD मार्गको लागि छनौट गर्दा, तपाईंको छनौट गरिएको शेयरहरूको मूल्य सम्पत्तिको वास्तविक-विश्व मूल्यको झल्काउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि ब्रिटिश अमेरिकी तम्बाको सेयरको मूल्य २ 2.3 घण्टाको अवधिमा २.24% ले वृद्धि भयो भने, यसको सम्बन्धित सीएफडी पनि २.%% ले वृद्धि हुनेछ।
Stock शेयर बजार अनुक्रमणिका ट्रेडिंग
यदि तपाईं स्टक र सेयर व्यापार गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ, तर तपाईंसँग व्यक्तिगत कम्पनी छनौट गर्न आवश्यक ज्ञान छैन भने, यो स्टक बजार अनुक्रमणिका विचार गर्नु उचित हुन सक्छ।
'सूचकांक' को रूपमा पनि परिचित, शेयर बजार अनुक्रमणिकाले तपाईंलाई एकल व्यापारमा सयौं कम्पनीहरूमा अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ - पछि बहु उद्योगहरूमा तपाईंको स्थिति विविधीकरण गर्दछ।
उदाहरणको लागि, एस एन्ड पी invest०० मा लगानी गरेर, तपाईं purchase०० भन्दा ठूलो US सूचीबद्ध कम्पनीहरूको सेयर खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै, FTSE १०० सूचकांकले तपाईंलाई लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध १०० ठूला कम्पनीहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिन्छ।
फेरि फेरी, यदि एक सीएफडी को रूप मा शेयर बजार अनुक्रमणिका को लागी विकल्प, तपाईं लामो वा छोटो जाने विकल्प हुनेछ। त्यस्तै रूपमा तपाईसँग अझै पनि नाफा कमाउने अवसर हुने छ विस्तृत फार्म स्टक बजारहरू तल भएको बेलामा।
स्प्रेड के हो?
चाहे तपाईं विदेशी मुद्रा वा CFD हरू ट्रेडिंग गर्दै हुनुहुन्छ - तपाईंको प्रसारको दृढ समझ हुनु आवश्यक छ। यसको सब भन्दा आधारभूत रूप मा, यो 'खरीद' मूल्य र 'बेच्ने' मूल्य बीचको भिन्नता हो। ट्रेडिंग कमीशनहरूको शीर्षमा, प्रसारले सुनिश्चित गर्दछ कि अनलाइन दलालहरूले पैसा कमाउँदछन्।
ब्यापारको रूपमा तपाईको लागि स्प्रेडको आकार महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले तपाईंलाई अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने शुल्कहरू के हो भनेर स .्केत गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि त्यहाँ ट्रेडि trading स्टकहरू फैलाउँदा 0.5.।% अन्तर छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले कम्तिमा पनि ०. make% कमाउनु आवश्यक छ केवल ब्रेक गर्न पनि।
CFD मा फैलाएको उदाहरण
ट्रेडिंग CFD हरूलाई फैलाउन गणना गर्न सजिलो तरीका भनेको केवल खरीद र बेच्ने मूल्य बीचको प्रतिशत भिन्नता लाई बाहिर काम गर्नु हो।
तपाईं तेल मा 'लामो' जाँदै हुनुहुन्छ
तपाईंको ब्रोकरले buy 71 को 'खरीद' मूल्य प्रस्ताव गर्दछ
'बेच्ने' मूल्य $ is। हो
यसको मतलब यो हो कि प्रसार $ 69 र $ 71 को बीचको भिन्नता हो
प्रतिशत सर्तमा, यो २.2.89%% को प्रसार हो
तपाईं तेल मा लामो वा छोटो जाने निर्णय गरे पनि, तपाईं २.2.89%% को स्प्रेड भुक्तान गर्नुहुनेछ। यसको मतलव तपाईले कम्तिमा पनि २.2.89।% कमाउनु पर्ने हुन्छ केवल भत्काउनको लागि।
You यदि तपाईं जानुहुन्छ लामो तेल मा, तपाईं तिर्नु पर्छ $ 71। यदि तपाईं तुरुन्तै तपाईंको स्थानबाट बाहिर निस्कनुभयो भने, तपाईं यसको बेच् मूल्यमा त्यसो गर्नुहुनेछ $ 69। त्यस्तै, तपाईंलाई तेलको मूल्य चाहिन्छ बढ्नु by 2.89% मात्र भाँच्न।
You यदि तपाईं जानुहुन्छ छोटो तेल मा, तपाईं तिर्नु पर्छ $ 69। यदि तपाईं तुरुन्तै तपाईंको स्थानबाट बाहिर निस्कनुभयो भने, तपाईं खरीद मूल्यमा त्यसो गर्नुहुनेछ $ 71। त्यस्तै, तपाईंलाई तेलको मूल्य चाहिन्छ घटाउनुहोस् by 2.89% मात्र भाँच्न।
लाभ भनेको के हो?
लाभ उठाउनु एक रमाईलो र अत्यधिक जोखिमपूर्ण उपकरण हो जुन तपाईं अधिक अनलाईन ट्रेडिंग साइटहरूमा फेला पार्नुहुनेछ। संक्षेपमा, लीभरेजले तपाईंलाई तपाईंको ब्रोकरेज खातामा भएको भन्दा उच्च स्तरमा व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ। विशिष्ट रकम एक कारकद्वारा निर्धारित गरिन्छ, जस्तै २: १,:: १, वा :०: १। उच्च कारक, अधिक तपाईं संग व्यापार गर्दै र यसैले - उच्च तपाईंको नाफा वा घाटा हुनेछ।
उदाहरणका लागि, मानौं हामीसँग तपाईंको खातामा £ 300 मात्र छ। तपाईं प्राकृतिक ग्यासमा लामो जान चाहानुहुन्छ, किनकि तपाईंलाई लाग्दछ कि सम्पत्ति अत्यधिक रूपमा मूल्यांकन गरिएको छैन। त्यस्तै रूपमा, तपाईंले १०: १ को लाभ उठाउनुहुन्छ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं वास्तवमै £ £००० को साथ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ।
यस उदाहरणमा, तपाईंको £ 300 अब मार्जिन छ। यदि तपाईंको व्यापारको मूल्य १०: १ (१००/१० = १०%) को एक कारकले गिरावट आएको छ भने, तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण मार्जिन हराउनुहुनेछ। यसलाई 'तरल पदार्थ' भएको भनि चिनिन्छ। त्यस्तै, यदि तपाईंको मार्जिन £ 10 थियो र तपाईं २ 1: १ मा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने, सम्पत्ति २ 100: १ (१००/२ = =%%) को एक कारकले तल झर्दा तपाईंलाई तरलता दिइनेछ।
यदि तपाईं बेलायतमा आधारित खुद्रा व्यापारी हुनुहुन्छ (वा त्यस चीजको लागि कुनै पनि यूरोपीयन सदस्य राज्य) हुनुहुन्छ भने, तपाईं युरोपियन सेकुरिटी र मार्केट्स अथोरिटी (ESMA) द्वारा स्थापित लीभरेज सीमाहरूद्वारा क्याप हुनुहुनेछ।
ESMA लाभ सीमा
🥇 :०: १ प्रमुख फोरेक्स जोडीहरूको लागि
🥇 :०: १ गैर प्रमुख विदेशी मुद्रा जोडी, सुन, र प्रमुख सूचकांकहरूको लागि
🥇 :०: १ सुन र गैर-प्रमुख इक्विटी सूचकांक बाहेक अन्य वस्तुहरूको लागि
🥇 :०: १ व्यक्तिगत स्टक को लागी
🥇 :०: १ क्रिप्टोकरन्सीहरूको लागि
बजार आदेशहरू: तिनीहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्?
यदि तपाईं अनलाइन व्यापार गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ बजार अर्डरहरूले कसरी काम गर्दछ। अनिवार्य रूपमा, यसले तपाईंलाई स्वत: ट्रेडहरू बन्द गर्न अनुमति दिनेछ जब निश्चित मूल्य बिन्दुहरूमा हिट हुन्छ।
उदाहरण को लागी, यदि एक व्यापार तपाईको पक्षमा जान्छ, तपाई स्वत: व्यापार बन्द गरी नाफाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलिली, यदि एक व्यापार तपाइँको बिरूद्ध जान्छ, एक बजार को आदेश व्यापार बाहिर निस्कन र यसैले - तपाइँको घाटा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
तल हामीले केहि सब भन्दा महत्वपूर्ण बजार आदेश सूचीबद्ध गरेका छौं जुन तपाईंलाई सचेत गराउन आवश्यक छ।
✔️ स्टप-घाटा अर्डर
नामले सुझाव दिए जस्तै, एक स्टप-लॉस अर्डरले तपाइँको समग्र एक्सपोजरलाई हराउने व्यापारमा कम गर्नेछ। उदाहरण को लागी, मानिलिनुहोस् कि तपाई Bitcoin मा सट्टा गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईले £ २,£०० को किन्न मूल्यमा £ २,००० को व्यापार खोल्नुहुन्छ।
त्यस्तै रूपमा, तपाइँ बिटकॉइनको मूल्य बढ्ने आशा गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाई स्टप-लॉस अर्डर पनि राख्नुहुन्छ यदि केसहरू तपाईको बिरूद्ध जान्छन्। तपाईं आफ्नो व्यापार मूल्य को 5% भन्दा बढी हराउन चाहनुहुन्न, तपाईं एक स्टप-घाटा अर्डर place 9,025 मा।
केही दिन पछि, Bitcoin ट्याking्कि is गर्दैछ र २०% मानमा हराउँछ। मूल रूपमा, तपाईंले £ 20 गुमाउनु हुने थियो (तपाईंको £ २,००० व्यापारको २०%)। जहाँसम्म, तपाईले ible,, ००400 मा एक समझदार स्टप-घाटा स्थापना गर्नु भएपछि, तपाईले आफ्नो घाटा केवल १०० डलर (% २,००० को%%) मा कम गर्नुभयो।
Stop ग्यारेन्टी स्टप-घाटा अर्डर
एक स्टप-घाटा अर्डर को रूप मा प्रभावी को रूप मा हुन सक्छ, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी कहिल्यै छ कि तपाइँको आदेश भरी छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ ब्रेक्सिट जनमत संग्रहको परिणाम को लागी GBP / USD मा एक स्टप-घाटा अर्डर राख्नुहुन्छ, यो आदेश को लागी एक क्रेता भेटिएको छ संभावना छैन। यो किनभने GBP / USD अत्यधिक अस्थिरता को अवधि को माध्यम बाट गए।
यसको विपरित, एक 'ग्यारेन्टी' स्टप-लॉस अर्डर सँधै मिल्नेछ, किनभने यो प्रभावी रूपमा तपाईं र दलाल बीच एक सम्झौता हो। नोट लिनुहोस्, तपाईंले ग्यारेन्टी स्टप-लॉस अर्डर कार्यान्वयन गर्न उच्च शुल्क तिर्नु पर्छ, यद्यपि यो केवल तिर्न लायक हुन सक्छ।
✔️ लिनुहोस्-प्रोफाइल अर्डर
जबकि यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईंको व्यापारलाई ठूलो घाटामा ओभरप्यापोजबाट बचाउनको लागि, तपाईंले एक नाफा गर्दा स्वचालित रूपमा व्यापार बन्द गर्न पनि अर्डर गर्नु पर्छ। अन्यथा, यदि तपाईं आफ्नो डेस्कटप उपकरणमा हुनुहुन्न भने तपाईंले लक-इन फाइन्सको अवसर हराउनुहुनेछ। त्यस्तै रूपमा, लिनुहोस्-लाभ अर्डर एक पूर्व निर्धारित मूल्य मा एक व्यापार बन्द हुनेछ।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईं १ silver.२18.24 डलरमा चाँदीको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, र यदि एक सम्पत्ति १०% ले वृद्धि गर्छ भने तपाईं मुनाफा लक गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं २०-०10 डलरमा टेक-प्रोफेसर अर्डर दिन सक्नुहुन्छ। यदि मूल्य $ 20.06 मा लाग्छ भने, व्यापार 20.06% को लाभ संग स्वचालित रूपमा बन्द हुनेछ।
कहिल्यै एक व्यापार सम्झना छैन
वास्तविक समय संकेत सूचनाहरू जब पनि एक सिग्नल खोलिन्छ, बन्द हुन्छ वा अपडेट हुन्छ
तपाईंको ईमेल र मोबाइल फोनमा तत्काल चेतावनीहरू।
प्रविष्टि मूल्य स्तरहरू
प्रत्येक संकेतका लागि प्रविष्टि मूल्य स्तर केवल यी सबै निःशुल्क प्राप्त गर्न माथिको सूचीमा हाम्रा शीर्ष ब्रोकरहरू मध्ये एउटा छनौट गर्नुहोस्।
GBP / USB खरीद
म बजार अद्यावधिकहरू, विशेष पदोन्नतिहरू र न्यूजलेटरहरू प्राप्त गर्न चाहन्छु। मैले नियम र सर्तहरू र गोपनीयता नीति पढेको, बुझेको र स्वीकार गरेको छु।
सर्वश्रेष्ठ फोरेक्स संकेत २०२१
फोरेक्स सals्केतहरू कसरी प्रयोग गर्ने
फोरेक्स ट्रेडिंग कोर्स
प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा दरहरू र चार्टहरू
फोरेक्स सिग्नल टेलिग्राम
फोरेक्स ब्रोकर गाइड
कसरी ब्रोकर छनौट गर्न
क्रिप्टो सto्केतहरू टेलिग्राम
जान्नुहोस् २ ट्रेड ग्याजेट गीक अनलाइन लिमिटेडको ट्रेडिंग नाम हो
कार्यालय 1/2373, स्तर जी, क्वांटम हाउस, 75 Abate Rigord स्ट्रीट, टा 'Xbiex, XBX 1120, माल्टा
दर्ता कम्पनी संख्या: 11746374
Lear2.trade वेबसाइटमा र हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप भित्रको जानकारी शैक्षिक उद्देश्यको लागि हो र लगानी सल्लाहको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। वित्तीय बजार ट्रेडिंगले उच्च स्तरको जोखिम बोक्छ र सबै लगानीकर्ताहरूको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। व्यापार गर्नु अघि, तपाईंले ध्यानपूर्वक आफ्नो लगानी उद्देश्यहरू, अनुभव, र जोखिम भूखमा विचार गर्नुपर्छ। केवल पैसा संग व्यापार तपाईं गुमाउन को लागी तयार छन्। कुनै पनि लगानी जस्तै, यस्तो सम्भावना छ कि तपाईं आफ्नो व्यापारको बेलामा केही वा सबै लगानीको घाटा सहन सक्नुहुन्छ। ट्रेडिंग अघि तपाईले स्वतन्त्र सल्लाह लिनु पर्छ यदि तपाईलाई केही शंका छ भने। बजारमा विगतको प्रदर्शन भविष्यको प्रदर्शनको भरपर्दो सूचक होईन।
Learn2.trade ले हाम्रो टेलिग्राम समूह भित्र प्रदान गरिएको सामग्रीको नतीजामा हुने नोक्सानको लागि कुनै जिम्मेवारी लिदैन। सदस्यको रूपमा हस्ताक्षर गरेर तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हामी वित्तीय सल्लाह प्रदान गरिरहेका छैनौं र तपाईले बजारमा लिने ट्रेडहरूको बारेमा निर्णय लिइरहनु भएको छ। हामीलाई थाहा छैन कि तपाईले रूपैयाँदो व्यापार गर्नु भएको पैसा वा जोखिमको स्तर तपाईले प्रत्येक व्यापारसँग लिनु भएको छ।
Lear2.trade वेबसाइटले तपाइँलाई उत्तम अनुभव प्रदान गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। तपाईंको ब्राउजरको साथ कुकीहरू अनुमति दिन सेट गरिएको हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गरेर, वा हाम्रो कुकी नीति सूचना स्वीकार गरेर तपाईं हाम्रो गोपनीयता नीतिमा स्वीकृति गर्नुहुन्छ, जसले हाम्रो कुकी नीति विवरण गर्दछ।
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० २ व्यापार जान्नुहोस्
१ वर्षको लागि नि: शुल्क वीआईपी फोरक्स सिग्नलहरू प्राप्त गर्न $ १०० जम्मा गर्नुहोस्!
VIP सिग्नलहरू पाउनुहोस्१ वर्षको लागि नि: शुल्क वीआईपी फोरक्स सिग्नलहरू प्राप्त गर्न $ १०० जम्मा गर्नुहोस्! १: to०० सम्मको लीभरेजको साथ MT4 मा व्यापार गर्नुहोस्!